नेदरल्यान्ड मा राजा दिवस Celebrating राम्रो हल्याण्ड मा सबै भन्दा राम्रो पक्ष हुन सक्छ. मा 27 अप्रिल, तिनीहरूले संग राजा Willem-अलेक्जेन्डर जन्मदिन मनाउन संगीत, सडक दल, फ्लिया बजार, र मजा मेला. राजा आफूलाई साथ देश मार्फत यात्रा आफ्नो परिवार. राजा दिवस अघि रात, राजाको रात हेगुइ संगीत शो र अन्य शहर र राष्ट्रलाई सबैभन्दा ठूलो फ्लिया संग मनाइन्छ ('निःशुल्क') उट्रेच मा बजार. पत्ता लगाउन यो सबै के हो तयार? तपाईं हुनुपर्छ किन यहाँ नेदरल्यान्ड मा राजा दिवस Celebrating.
Juliana, अर्को रानी र Wilhelmina छोरी, मनाइन्छ रानी दिवस 30 April withaparade on Soestdijk. Beatrix also celebrated Queen’s Day on 30 अप्रिल (आफ्नै जन्मदिन जनवरी छ) तर उनको आमा विपरीत, त्यो उनको सम्पूर्ण परिवारको लिएर देश भर यात्रा to visit several municipalities. राजा Willem अलेक्जेन्डर has followed in this tradition. उहाँले मा जन्म भएको थियो 27 अप्रिल र यो मा आधिकारिक दिन भयो 2014 नेदरल्यान्ड मा राजा दिवस Celebrating लागि.
नेदरल्यान्ड मा राजा दिवस Celebrating गर्दा, मान्छे एक अनुमति आवश्यकता बिना सडक मा कुराहरू बेच्न अनुमति. फ्लिया ('निःशुल्क') बजार पार्क र सडकमा आयोजित छन्, धेरै मानिसहरू अनावश्यक सरसम्पत्ति भेटी संग, संगीत वा बिक्री को लागि अन्य मनोरञ्जन. एक ग्यारेज बिक्री रूपमा विचार, तर एक धेरै ठूलो मात्रा मा! उट्रेच मा, को फ्लिया बजार पनि राजा दिवस अघि रात सुरु. त्यसैले तपाईंको पैदल जूता प्राप्त.
नेदरल्यान्ड मा राजा दिवस Celebrating को हुर्किसकेका-अप लागि मात्र छैन. त्यहाँ लागि शहर भर भइरहेको गतिविधिहरु प्रशस्त छन् जवान र हृदय मा जवान अनुहार-चित्रकला सहित, खेल र खेल घटनाहरू. Check the King’s Day family fun page for more information.
नेदरल्यान्ड मा राजा दिवस Celebrating सार्वजनिक छुट्टी छैन बाँकी एक दिन पक्कै छ, तर. डच, expats र पर्यटकहरु उस्तै उत्सव को एक दिन को लागि एम्स्टर्डम गर्न बगालको. रमाइलो परंपरागत ठूलो दिन को पूर्वसन्ध्या मा सुरु (राजाको रात) with the carnival atmosphere continuing throughout the city on King’s Day. डीजे सार्वजनिक वर्गहरूको मा दल प्ले, झन्झन् सजाया डुङ्गा बाट सडकमा मा नहरहरुमा र प्रत्यक्ष संगीत पोखिन्छ भर्न क्याफे पातिओस. Read more about King’s Day events.
डच, expats र पर्यटकहरु उस्तै नेदरल्यान्ड मा राजा दिवस Celebrating लागि एम्स्टर्डम गर्न बगालको. पक्का मजा बाहिर सम्झना गर्छन् गर्न, र प्रयोग अब बुक एक ट्रेन सेव with No hidden fees and easy as 1, 2, 3!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/celebrating-kings-day-netherlands/ - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
ट्रेन यात्रा, Train Travel Norway, Train Travel Scotland, ट्रेन यात्रा स्वीडेन, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप